သပြေရွက်တစ်ရွက်တည်းမှ ထူးဆန်းစွာ ရေစိမ့်ထွက်ခြင်း | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Myanma News » သပြေရွက်တစ်ရွက်တည်းမှ ထူးဆန်းစွာ ရေစိမ့်ထွက်ခြင်း
သပြေရွက်တစ်ရွက်တည်းမှ ထူးဆန်းစွာ ရေစိမ့်ထွက်ခြင်း
Posted by etone on Dec 3, 2011 in Myanma News, News | 27 comments
ဒီနေရာလေးက ရေလေးတွေ သီးနေတာပါ ။
ထူးတော့ထူးနေတာပဲ ... ။
လာပြန်ပြီ အထူးဆန်းလို့တော့ မပြောနဲ့ဦးနော် … ။ တကယ့်ကို သဘာဝလွန်ဖြစ်ရပ်မို့ ကိုယ့်ရွာသားတွေ ဦးဦးဖျားဖျား သိရအောင် တင်ပေးတာဖြစ်ပါတယ် … ။ အမြဲတမ်း သတင်းဆို ပေါက်ကြားမှာ စိုးလို့ သူ့ဂျာနယ်တိုက်အတွက်ပဲ ဦးစားပေးခဲ့တဲ့ ကျွန်မအစ်ကို ထူးထူးဆန်းဆန်းသဘောကောင်းနေတာကြောင့် ဒီသတင်းလေး သူ့ဆီက ရခဲ့တာပါ … ။
သပြေအိုးထဲက အရွက်တစ်ရွက်ကနေပဲ … ရေစိမ့်ကျနေတာပါ … ။ နေရာကတော့ မင်္ဂလာတောင်ညွှန့် မြို့နယ် ၊ ဗညားဒလလမ်းက The Professional Co.,Ltd မှာဖြစ်ပြီး … ဘုရားပန်းအိုးထိုးထားတဲ့ အောင်သပြေအိုးရဲ့ သပြေရွက်တရွက်ကနေ ရေတွေစိမ့်ထွက်နေတာပါ .. စတင်ဖြစ်ပွားခဲ့တာကတော့2ရက် ဒီဇင်ဘာ မနက် ဆယ်နာရီ ဆယ့်ငါးမိနစ်ခန့်ကဖြစ်ပြီး စတင်တွေ့ရှိချိန်မှာတော့ ရေများကျဆင်းမှဟာ လေးငါးစက္ကန့်လျှင် ရေတစက်ခန့်ယိုစိမ့်ပြီး ညနေပိုင်းအချိန်တွင်တော့ သုံးလေးမိနစ်မှ ရေတစက်ခန့်သာ ယိုစိမ့်တော့တယ်လို့ သိရပါတယ် ။ သို့သော် ယခုအချိန်ထိ ဆက်လက်ယိုစိမ့်နေပြီး သွားရောက်လေ့လာသူအများပြားရှိခဲ့တယ်လို့လည်း သတင်းရပါတယ် ။
ဓါတ်ပုံတွေကတော့ ကျွန်မအစ်ကို ဓါတ်ပုံထုတ်ပြီးသားကို ဖုန်းကင်မရာနဲ့ ပြန်ရိုက်ရတာကြောင့် နည်းနည်းတော့ဝါးနေပါတယ် … ။ ပြည်တွင်းသတင်းစာတွေ ၊ ဂျာနယ်တွေမှာ မကြာခင် ဖော်ပြခြင်း ခံရမယ်လို့ လည်း ခန့်မှန်း ပါတယ် …
လာပြီ…….လာပြီ……………ဒေါ်သက်ရီ (အဲဟုတ်ပေါင်) ဒေါ်အိတုန် ရဲ့ သတင်းထူးတွေ………………….သတင်းဦးတွေ………
ပန်းအိုးက ရေပြည့်နေလို့ အောက်ဆုံး အရွက်က ရေစီးကျလာတာ များလား..
ထားပါတော့.. တကယ့် အထူးအဆန်း အိမ်မှာ ဖြစ်ဖူးတယ်
အိမ်တွင်းအုန်း ဆိုပြီး အုန်းသီးဆွဲထားတာ ဘယ်နေရာမှာမှ အပေါက် မရှိပဲ အညှာထဲက အုန်းရေတွေ ဆူပြီးတော့ လျှံကျဖူးတယ်။ ၇ရက်ဆက်တိုက်.. ၇ရက်ကျော်တော့ အညှာ က ဟာလာတယ်။ နောက်တော့ အုန်းရေ စိမ့်ထွက်တဲ့ အပေါက် မြင်လာရတယ်။
အဲဒီနောက်ပိုင်း အုန်းသီး အိမ်မှာ မဆွဲတော့ဘူး။ အုန်းသီး ဆွဲတဲ့ ဓလေ့ ကို ဖျက်သိမ်းလိုက်တယ်။
အံ့သြစရာတွေက တစ်ခုပြီးတစ်ခု ဆက်တိုက်ပဲ … ။ အချိန်အခါမဟုတ် ပိတောက်တွေပွင့်၊ အခုလဲ ဘုရားပန်းအိုးထိုးထားတဲ့ သပြေအိုးရဲ့ သပြေရွက်တစ်ရွက်က ရေစက်ကျတာတဲ့ … မြန်မာနိုင်ငံအတွက် အတိတ်ကောင်း နမိတ်ကောင်းတွေပဲဖြစ်ပါစေ…။
အမယ် ဒါတင် မဟုတ်သေးဘူးဗျ ဒီနေ့မနက်လဲ အချိန်အခါ မဟုတ် မိုးရွာသေးတယ် ..။
အေးချမ်းတဲ့ အတိတ် နမိတ်တွေပဲ ဖြစ်ပါစေ …
ကောင်းတာတွေဖြစ်လာပြီး ၊ ကောင်းကျိုးတွေအမှန်ခံစားရရှိနိုင်မယ်လို့ ယုံကြည်မိပါတယ်..
ေ၇ွှထွက်ရင် ကိုရင်မောင့်ကို ဘယ်လာပြောမလဲ….။ မမယ်မ သူ့ဖာသူ ယူထားလိုက်မှာပေ့ဟ……။ ဟူတ်ဝူးလား..
သပြေ ဂျု့ စ် ဆိုပြီး
သဂျီးလည်း နှစ်သစ်ကူးမှာ ဘုန်းကြီးဝတ်နဲ့ ဝိပဿနာစခန်း ဝင်တော့မယ်တဲ့……။ အဲဒါ ပိုမဆန်းဘူးလား။။။။
သတင်းဦး သတင်းထူးကို အခုလိုမျှဝေလို့ ဒီရွာသူားတွေ ခေတ်မှီနေတာ
အင်း … စူပရာ နေချာရယ်တွေ ပြော နေတာပါလား….
ပါဆင်နယ် အမြင်ပြောမယ်နော် …
၁။ တန်ခိုး ပြဒယ် ဘာညာ အနေနဲ့တော့ ယုံဝူး (ထူးတော့ထူးတာပေါ့လေ နော….)
၂။ မှန်ကန်တယ်ထင်ဝူး…(သည်လိုဖြစ်ရတဲ့ အကြောင်းတရား ဘယ်သူသိပါသလဲ …
ဥပမာ အများနဲ့ ယှဉ်လိုက်ရင် ….သီလမြဲလွန်းလို့ …………..ဘာဝနာ များလွန်းလို့
တန်ခိုးပြတာဆို ….. အင်း……..ပြတဲ့တန်ခိုးရှင်ရယ် မျက်နှာလိုက်လိုက်တာ..
သည်ထက် blahblahblah တဲ့နေရာတွေ blahblahblah ကြောင်းပါ….
၃။ reason why?? တွေ ရှိမယ်ပဲထင်တယ်……
သတင်း တန်ဖိုးမရှိတဲ့ သတင်းတခု ဟု ယူဆကြောင်း……………
အပင်က ရှင်သန်ဖို့ ရေစုပ်တယ်ဆိုတော့ အင်း???? အကိုင်းက ခုမှချိုးလာတာဆိုတော့ ရေစုပ်တာအရှိန်မသေသေးလို့ ထင်တယ် ဟီးး။ အရွက်ကလေးကလည်း ထိပ်နားမှာပြတ်နေတယ်။ ရေက အကိုင်းကနေ ရိုးတံကိုရောက်ပြီး ပြန်ထွက်လာတာလား မသိဘူး။ ထင်ရာပြောကြည့်တာ
သဂျီးမင်း ဘာညာသရကာ ဘာလာပြောမလဲ ကြည့်လိုက်အုံးမယ် ဟီးဟီးးး
မအိတုံက အထူးအဆန်းတော့ ရတတ်ပါတယ်
ကြည့်ရတာ အဲဒီ အရွက်ကလေးကရေစုပ်ယူအားများထားပြီး
ရေ ဆိုတာကလည်း အေးချမ်းခြင်း ငွေလျှံခြင်း ဆိုကြတာပဲ၊
Post တင်သူ အိတုန်လေး အောင်မြင်ပါစေ၊ အေးချမ်းပါစေ၊ ငွေလျှံပါစေ။
အဲ့ဒီကကျတဲ့ရေနဲ့ ပီယဆေးဖေါ်လို့ရတယ်….ပြေတီဦးတောင်အိန်ဒြာကျော်ဇင်ကို အဲ့ဒီ့ပီယဆေးသုံး
အောက်ပါအကြောင်းကို သဂျီးမင်းအာဘော်ဟု သဘောထားပါ
ရူပဗေဒနည်းအရ ဆိုင်ဖွန်နည်းဖြင့် ရေစုပ်ခြင်းကို မြင်ကြည့်ဂျဘာဂုဏ်
ပို၍ မြင်သာစေရန် ဌာနဆိုင်ရာကားဒရိုင်ဘာများ
၄င်းတို့မောင်းနှင်သည့် မော်တော်ယဉ်ဆီတိုင်ကီအတွင်းမှ ဆီများကို
ပိုက်ဖြင့် ခိုးစုပ်ထုတ်ပြီးရောင်းသည်ကို မြင်အောင်ကြည့်ပါ
သပြေရွက်၏ ရေစက်ကျရာ အရွက်ထိပ်ပိုင်းသည် ပန်းအိုးတွင်းရှိရေ၏
သပြေခက်၏ အကိုင်းတွင်းတွင် အလွန်သေးငယ်သော ဂလိုင်ပေါက်များမှတစ်ဆင့်
အရွက်၏ အတွင်း ဂလိုက်ပေါက်များအတွင်းမှ
အင်တာနေရှင်နယ် အောက်စဖုတ်ကျောင်းအား ထုံးသုတ်သူ မိုက်ကယ်ဂျော်နီအောင်ပု
♣-ရေထပ်မဖြည့်ပါနဲ့..
၃ မျိုးစလုံးလုပ်ပါ…ထိုအခါ..ထွက်တဲ့ရေများ ပြန်ဝင်သွားပါလိမ့်မည်
အင်တာနေရှင်နယ်..အပေါ်စဖုတ်ကျောင်းအား ဖုံသုတ်သူ..မိုက်စကယ်ပေါက်စဖော် ပြောသကဲ့သို့
” သပြေပန်း ထည့်ထားသည့်ခွက် အသစ်ပြောင်းထည့်လျှင် (သို့မဟုတ်) နေရာပြောင်းလျှင် … ??????
ရေလုံးဝမထည့်လျှင် …. ??????
ရေအလျှံမထည့်ဘဲထားလျှင် … ????? ”
ထိုကဲ့သို စမ်းသပ်မှုမျိုးလုပ်ခဲ့လျှင် ရရှိခဲ့သည့် ရလဒ်အား ကြမ်း(ကျမ်းဟုမယူစစေချင်ပါ)ပြုလုပ်နေသူ ကျွန်တော့်အား ဖြေပေးစေချင်ပါသည် …
အင်တာနေရှင်နယ် … အလယ်စဖုတ်ကျောင်းအား ကြမ်းတိုက်သူ မိုက်ကယ်သောမတ်စ်ကင်းးးးးးးးး
အဲဒီအရွက်ကို အပြည့်ထုတ်ရင်ကော ရေက ထွက်ကျလာမှာလား။ ရေတွေပြည့်နေရင်လည်း အရွက်ကနေ ရေစိမ့်ထွက်တာပဲလေ။ သပြေရွက်က ထွက်ကျတယ်ဆို လက်က ကိုင်ထားလည်း ထွက်ကျလာရမှာပေါ့နော်။ ကိုင်ပြီးကော မရိုက်ခဲ့ဘူးလား။
သပြေခက်က ရေမထွက်ပဲ ရေနံတို့ဓါတ်ငွေ့တို့သာ ထွက်လို့ကတော့ အဲဒီသပြေခက်ရှိတဲ့အိမ်ကတော့ ခြောက်လမ်းသွားကွန်ကရစ်ခင်းဖစ်ပီးသားပဲ …..
တကယ်လို့.. ပန်းအိုးထဲ..ရေမရှိပဲ.. ရေက.. အလိုအလျှောက်ထွက်လာရင်တော့တမျိုးပေါ့..။
ဒါကလည်း.. အိမ်တွင်းအလှစိုက်..အပင်တော်တော်များများ ဖြစ်တတ်တယ်သတိထားမိတာပါ..။
သဂျီးရေ .. ဒီသတင်းလေး ဖတ်လိုက်ရပါတယ် … ။ (အံ့သြလားဟင် )
24/7 ဂျာနယ်ရဲ့ ဒီဇင်ဘာလ 11ရက်နေ့ထုတ် No.7 Vol2မှာရေးထားပါတယ် … ။ ရေးသားထားချက်ကတော့ အဓိဌာန်လိုက်လို့ အောင်သလိုလို ဘာလိုလိုပေါ့နော် … ။
တခြားဘယ်ဂျာနယ်မှာပါသေးလဲတော့ မသိဘူး … 24/7တောင် ဟိုလှန်ဒီလှောနဲ့ လုပ်ရင်းတွေ့တာ …
အာ.. သဂျီးကလည်း … ပြသနာပါပဲ … ။ အရွက်တွေ အများကြီးရှိတဲ့ အထဲက အဲ့ဒီအရွက်တရွက်ကပဲရေထွက်နေတာ ..သဘာဝမှ ဟုတ်ရဲ့လားလေ … ။ ဂျာနယ်တွေကလဲ သတင်းယူထားကြတယ် သူတို့ ဘယ်လိုဖော်ပြမလဲ စောင့်ကြည့်ချင်သေးတယ်
အခုလို တင် ပေးထာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာ…